HIM | Health in Myanmar » တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းဟာ ကောင်းတဲ့ အပြုအမူလား
သင်ဟာ လူငယ်ဖြစ်ပြီး တစ်ကိုယ်ရေ အာသာဖြေခြင်းဟာ မကောင်းတဲ့ အပြုအမူတစ်ခုလားလို့ သိချင်နေပါသလား။ ဒီ အပြုအမူဟာ မှားယွင်းတဲ့ အပြုအမူတွေလား။ ဒါကို သင်တစ်ယောက်ထဲ ပြုမူနေတာလား။
တစ်ကိုယ်ရေ အာသာဖြေခြင်းဟာ ဘယ်လိုဆိုးရွားတဲ့ အချက်တွေ ဖြစ်စေနိုင်သလဲ။ တစ်ကိုယ်ရေအာသာဖြေခြင်းဟာ အနာဂတ်မှာ အထူးသဖြင့် အိမ်ထောင်ပြုပြီးတဲ့အခါမှာ ပြသနာဖြစ်စေနိုင်သလား။အစရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သိရှိလိုပါသလား၊ ဒီဆောင်းပါးက ဒီမေးခွန်းတွေအားလုံးအတွက် အဖြေပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းဟာ မကောင်းတဲ့ အပြုအမူမဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းဟာ ကျန်းမာခြင်းရဲ. ပြယုဂ်တစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး ။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းကို ဆန့်ကျင်စရာ အကြောင်းမရှိပေမယ့် ၊ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကို အလွန်အကျွံ ပြုမူနေမိတာ မျိုးကိုတော့ ငြင်းပယ်ရပါလိမ့်မယ် ။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကြောင့် သင့်အတွက် ကောင်းကျိုးတစ်ချို့ ရှိပါတယ ။ အဲ့ဒါတွေကတော့ -
- သင့်အနေနဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ် လုပ်ကိုင်ရခြင်းတွေအတွက် အားသစ်မွေးပေးနိုင်ပါတယ်။
- စိတ်တိုဒေါသထွက်လွယ်မှုကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
- မကြာခဏခေါင်းကိုက်ခြင်းကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ။
- လိင်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ရာဇဝတ်တွေ မဖြစ်ပွားနိုင်တော့ပါ။
- စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်ပြီး မကြာခဏ ဖျားနာမှုကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
- စိတ်ချမ်းသာမှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။
- ဒီအချက်တွေအားလုံးဟာ သင့်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေး ရှိကြောင်း ပြနေတာပါပဲ။
သင်ဟာ တစ်ကိုယ်ရေအာသာဖြေခြင်းကို တစ်ရက်တစ်ကြိမ် ဒါမှမဟုတ် နှစ်ရက်ခြားတစ်ကြိမ် ပြုလုပ်တက်သူဆိုလျှင် ဒါဟာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး ။ သင့်မှာ အာသာဖြေခြင်း ပြုလုပ်ဖို့ နှိုးဆွမှုတစ်စုံတစ်ရာရှိနေပြီး သင့်ခန္တာကိုယ်ကလည်း တောင်းဆိုနေတယ် ဆိုရင်တော့ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သင်ဟာ တစ်ယောက်ထဲ ရှိနေပြီး အခြားလည်းဘာမှလုပ်စရာမရှိတာမို့ သင့်ခန္တာကိုယ်ကလည်း မတောင်းဆိုပါပဲ တစ်ကိုယ်ရေအာသာဖြေခြင်းကို ပုံမှန်အလုပ်တစ်ခုလို လုပ်နေမိတယ်ဆိုရင်တော့ အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အပြုအမူလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ကိုယ်ရေအာသာဖြေခြင်းကို အလွန်အကျွံပြုလုပ်ခြင်းဟာ မကောင်းတဲ့ အပြုအမူပါ။
ကျွန်တော်တို့ဟာ အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရေ အာသာဖြေခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ကြရမှာပါ။ သင့်အနေနဲ့ လိင်စိတ်ဆန္ဒလည်း မဖြစ်ပါပဲ တစ်ကိုယ်ရေ အာသာဖြေခြင်းကို အလေ့အကျင့်တစ်ခုလို စွဲစွဲမြဲမြဲ လုပ်ဆောင်နေမိပြီ ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ကြီးမားတဲ့ ပြသာနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်ကိုယ်သင် ထိန်းချုပ်ပြုပြင်ရမှာပါ။ သင့်ကိုထိခိုက်စေမယ့် ပြသာနာတွေထဲက အချို့အချက်တွေကတော့ -
- သင့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကင်းကွာလာနိုင်ပါတယ်။
- သင့်တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းကို သာယာနေမယ် (ဆိုးရွားလာရင် ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်ကို မလိုချင်တော့တာမျိုးထိ ဖြစ်နိုင်)။
- သင်ဟာ အခြားဘယ်သူ့ကိုမှ မလိုချင်တော့ပဲ ၊ သင်ကသာ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းလို့ ယူဆလာနိုင်ပါတယ်။
- အခွင့်အရေးရတာနဲ့ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းကိုပဲ လုပ်ချင်လာပါလိမ့်မယ်။
- သင့်ဟာသင် တကူးတကဖန်တီးပြီး တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကို ပြုလုပ်မိပါလိမ့်မယ်။
- သင်ဟာ မဟုတ်ကဟုတ်ကနည်းတွေကို လျှောက်စမ်းသပ်ပြီး အာသာဖြေခြင်းမျိုး ပြုလုပ်မိနိုင်ပါတယ်။
- သင်ဟာ ဆန်ကျင်ဖက်လိင်ကို မမျှော်လင့်တော့ပဲ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းကိုသာ ဘဝတစ်သက်တာ ပြုသွားနိုင်ပါတယ်။
- ဒါကို တစ်နေ့တစ်ကြိမ် နှစ်ကြိမ်မက ပြုလုပ်ချင်နေခြင်းမျိုး ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
- တစ်ကိုယ်ရေအာသာဖြေခြင်းကို မလုပ်ရရင်မနေနိုင် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
- ဒါကို ဘယ်တော့မှ အဆုံးသတ်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
အလွန်အကျွံ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကြောင့် လူမှုဘဝမှာ ရလာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေအပြင် သင့်ခန္တာကိုယ်ကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။
ပထမဆုံးအကြိမ် အတွေ့အကြုံမှာ လိင်အဂါင်္အရင်းပိုင်းဟာ တွန့်လိမ်သွားတာကို ခံစားမိချင်မှ ခံစားမိပါလိမ့်မယ်။ နေ့စဉ် အမျှပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ကို သိလာပါလိမ့်မယ်။
သင့်အနေနဲ့ အမျိုးသမီးအကြောင်း စဉ်းစားလိုက်မိတာနဲ့ သင့်ရဲ. အဂါင်္ထိပ်ဖျားဟာ စိုစွတ်တာမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာ အလွန်အကျွံ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ သင်ဟာ သင့်ဆန္ဒ အလွန်တက်ကြွခြင်း မဖြစ်ခင်မှာပဲ သုတ်လွှတ်တာမျိုး ဖြစ်တက်ပါတယ်။ ဒါဟာ သင့်ခန္တာကိုယ်ဟာ အနည်းငယ်သော လိင်စိတ်ဖြစ်ရုံမျှနဲ့ သုတ်လွှတ်ပြီး ပြီးဆုံးခြင်း ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိသွားတာမျိုးပါ။ ဒီအခြေအနေဟာ သင်အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့ အခါမှာ သင့်အဖော်နဲ့ သင့်ကြားမှာ ပြသာနာ တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
သိပ္ပံနည်းကျအားဖြင့် ဘယ်လိုပြောရမယ် မသိပေမယ့် သင့်ရဲ. ခြေဖမိုးတွေ နာကျင်တာ၊ ခြေသလုံးတွေ ညောင်းညာ ကိုက်ခဲတာမျိုး ဖြစ်တက်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ပင်ပန်းတဲ့ အလုပ်၊ လေ့ကျင့်ခန်း စတာတွေကို မလုပ်ထားပဲနဲ့တောင် ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ။ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းကို ရပ်နားလိုက်တဲ့ အခါမှာ အဲ့နာကျင်မှုတွေလည်း ပျောက်သွားမှာပါ။
ဒါဟာ သိသာတဲ့နာကျင်မှုမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သင် တင်းနစ်ရိုက်တာမျိုး ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ ခံစားရတဲ့ နာကျင်မှုပုံစံမျိုးပါပဲ။
ဒီနာကျင်မှုဟာ အရှိန်ကာလရှည်ကြာစွာ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ ဖြစ်တက်ပါတယ် ။ သင်ဟာ အာသာဖြေခြင်းကိုသာယာပြီး ခရီးဆုံးပန်းတိုင် မရောက်မှီ ခေတ္တနားလိုက် နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံပြုလိုက်နဲ့ ပြုမူတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ ပေါင်ရင်းမှာ နာကျင်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းဟာ သင့်မှတ်ဥာဏ်ကို မထိခိုက်စေတဲ့အပြင် သင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုတောင် ပိုမိုကောင်းမွန်စေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သင်ဟာ ဒီအပေါ်မှာ သာယာပြီး အလွန်အကျွံပြုမူမိတဲ့ အခါ တစ်ချိန်လုံး လိင်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်တာတွေပဲ တွေးနေမိပြီး မှတ်ဥာဏ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်မှု အားနည်းလာတာမျိုး ဖြစ်တက်ပါတယ်။
Myanmar Portal - တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းဟာ ကောင်းတဲ့ အပြုအမူလား